Turkiga oo nooc cusub oo mashruuc ka fuliyay dalka (SAWIRRO) – AfmoNews
Turkiga oo nooc cusub oo mashruuc ka fuliyay dalka (SAWIRRO)
Turkiga ayaa nooc cusub oo mashruuc ah markii ugu horeysay ka fuliyay dalka, taasoo wax-ka-tari doonto baahi badan oo loo qabay.
Hay’adda Horumarinta TIKA oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa mashruucaan oo isugu jiray shaybaarada biyaha, ciida, laamiga iyo qalabka dhismaha ka hirgelisay Jaamacadda Muqdisho (Mogadishu University).
Munasabadda furitaanka ee mashruucaan ayaa waxaa ka qaybgalay Danjiraha Turkiga ee Somaliya, Amb Mehmet Yılmaz iyo xubno ka socday Wasaaradda Tamarta & Biyaha ee xukuumadda.
Danjire Mehmet Yılmaz ayaa qoraal uu soo dhigay barta Safaaradda Turkiga ku leedahay Twitter-ka waxa uu ku sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka munaasabadaaasi.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan ka qaybgalo munaasabadda furitaanka shaybaarada biyaha, ciida, laamiga iyo qalabka dhismaha ee Jaamacadda Muqdisho.” Ayuu yiri Danjiraha.
Danjire Yılmaz ayaa intaa ku daray “Shaybaaradan oo ah kuwii ugu horeeyay noociisa ee laga hirgeliyo Somaliya ayaa waxaa ku deeqday Hay’adda TIKA, waxaana loogu talagalay Kulliyadda Injineeriga Madaniga ee Jaamacadda.”
Turkiga waa saaxiibka ugu weyn ee maanta Soomaali leedahay, iyadoo Dowladda Federaalka uu ka caawiyo kaabayaasha dhaqaalaha, dib u dhiska dalka iyo dhismaha ciidamada qalabka sida.